Multikulti : Soomali : Caafimaad : Xanunka diiqada ee umusha
You are here : Multikulti / Soomali / Caafimaad / Xanunka diiqada ee umusha
Tusmo, iskaa isu taageer
Sidee jihayntani kuu caawin kartaa?
Buugan yari waxa loogu talogalay dumarka ku sugan diiqad umusha ka dib iyo asaxaabtooda iyo reerahooda.
Buugan yari waxa uu ujeedaa:
Hadii aad u diiqadaysantahay waxay u dhowdahay in aad xataa buugan yar akhri karin. Malaa waa kugu dheeryahay ama kugu adagyahay? Fadlan haka werwerin. Waxa halkan ku qoran macluumaad badan, markaa marba in yar qaado. Haddii meelaha qaarkood kugu cuslaadaan, malaha waxa fiican in aad lataliyaha caafimaadka ama GP –ga kala tashato. Ama kusoo laabantid markaad fayow dareentid. Hadii dabiib ama lataliye ku siiyo buug, malaha waxa kuu fiican inaad iyagu kula akhriyaan.
PND gu waa la mid diiqada ‘caadiga ah’, waxa faa’iido kuu yeelan kara waraaaqaha ‘diiqada jahayn iskaa wax u qabso ah’ iyo ‘diiqad, maqaal macluumaad ah’. Fadlan weydii dabiibka iyo GP –ga arimahan.
Warka fiicani waxa weeye, sida diiqadaha diiqada umushu wuu qaataa daweenta, dumarka intooda badanina waa ladnaadaan.
Buugan yari looguma talo-gelin dumara dhibaatadanu hayso. Waxay uga baahanyihiin kaalmo gaar ah dhakhtarkooda. Daweenta caadiga waxa ka mid ah dawada iyo in muddo ah loo daayo qaybta ilmaha iyo hooyada (ee cisbitaalka). Waxa xasuus mudan, in kastoo xanuunka fudaydka umushu uu baqdin u leeyahay hooyada iyo reerkeeda, hadana daweentiisu waa sahlantahay dadka inta badanina way ka bugsadaan.
hoos u dhac ama
Kacsanaan, cidhiidhi aanad nasan karin
• Feejignaan darro
• Awood darri aanad go’aan qaadan karin
• Feker isku qasan
Diidmada dad la kulanka, joojinta inaad debeda u baxdid
Hadii aad saxday dhawr sanduuq, una malaysay inaad had iyo jeer samayso, waxa suurtogal ah inaad nooc diiqad ah ay ku hayso. Hadii tani dhacday dhowr wiig ama bilood marka aad ilmo dhashay waxa suurtogal ah in diiqada umushu ku hayso.
Haddii uu ku hayo (xanuunka) diiqada umushu waxa muhiim ah inaad garato
Tan, kaalmona dalbato.
Xasuusnow, diiqadu umushu waa mid inta badan dhacda, oo hela shantii dumar ah mid. Markaa fadlan la hadal reerkaaga, booqdaha caafimaadka (health visitor) ama dhakhtarka, weydiisana kaalmo.
Si kasta ha ahaatee, dawooyink lidka ku ah diiqada, ama dawooyinka kale way ku caawin karaan. Wedii dhakhtarkaaga inuu kala gorfeeyo.
Sababtoo ah walidiin badan oo cusubi kuma dhowa reerkooda inta kale, noloshoodu waxay noqon kartaa mid cidla ah. Hooyooyin badani ma heli karaan dad caawiya. Gaar ahaan kuuwa aann haysan hooyadood, waqtigani cidhiidhi buu ku noqon karaa. Xataa kuwaa ehel haystaa way ku adkaan kartaa kaalmo wax ku ool ah.
Jaraaidka, magazine-ka, branaamijyada telifishanka, waxay sheegaan in haysashada ilme uu aad u fiicanyahay, laakiin aaney dhinaca dhibaatada wax badan ka sheegin. Waxa ay ka maqlaan saxaafada iyo dadka kale, duumarka marmar waxay moodaan in ay khasab tahay in xili aad u fiican u noqdo. Waxay u maleeyaan in hooyo kasta dhasho si dabiici ah, inay noqoto hooyo ‘toosan’. Arintani waxay adkaynaysaa kaalmo waydiisiga.
Waxaanu ognahay dad la kulmay dhacdooyin hore oo dhibaato leh inay u jilicsanyihiin diiqada umusha, marka ay ilmo dhalaan. Tusaale, dhicis hore, hooyo la’aan, dhibaato xaga maalka , iyo guriyeenta ah. Ugu danbayntii waxa ka mid ah kuwa waaweyn ee diiqada keena isbedelka, waa yartahay wax bedela noloshaada oo ilme cusub la mis ahi.
• qiro in ay jirto in dhibaato jirto
Wey adkaan kartaa inaad sameyso isbedeladan, maxaa yeelay sida diiqadu u saameeso fekerkayaga, dareenkayaga, iyo sidaynu u dhaqano. Farsamadan soo socotaa waxa kale oo ay kaa caawin kartaa afkaarta, dhaqanka, iyo dareemada aan fiicnayn.
Hadii tani adiga dhibaato kuu tahay, samee liis waxyaalaha aad doonaysid inaad sameeso, ka dib sii qorshee sidii aad arin kasta u sameen lahayd. Ka biloow tan kuugu sahlan, hana tiigsan meel sare. Eeg liiskaaga, kadibna sax intaad qabatay. Maalinta dhamaadkeeda waxaad eegi kartaa waxa aad sameesay. Jimicsiga jidhka waxa sare u qaadi karaa niyad-samigaaga. In yar marba ku dar qorshahaaga. Dhexgalka asxaabta, reerkaaga, iyo jaarka wey ku caawin kartaa. Ururada sida ‘Family Link’ (eeg qaybta meesha aan kaalmo dheeraad ah ka heli karo) waxay kaa caawin kartaa taageero sidii aad (dad) u dhexgeli lahayd.
Marka aad qortid waxyaalaha aad doonaysid inaad qabato maalintii, dhinac dhig P kuwa aad jecleysatey, kuwa aad (guul) ka gaadheyna dhinac dhig A.
Tijaabi in aanad hoos isu dhigin. Dadka diiqadeysani ma qirtaann guusha ay gaadheen. Tijaabi in aanad naftaada barbar dhigin sidii aad beri ahaan jirtey. Ku boori naftaada waxa aad awoodaysid inaad maamusho. Marka aad diiqadeysantahay wax kasta qabashadoodu wey adagyihiin, sidaa awgeed waa inaad abaal marisaa, qirtaana (guushaas). Markaa samee maalinkasta wax ku raali geliya, nafta u abaalgud – wey kuu caawinaysaa.
B. afkaartaada – uma dulqaadanayo tan. Waan doonayaa in aan gilgilo. Waxaan ahay hooyo aan qiimo lahayn. Ma mudni in aan haysto iyada (ilmaha).
Siday qaribantahay, la yaab maleh inaad xumaan dareentid! Waxa muhiim ah inaad sadexdaa arimood ogaatid. Sababtoo ah waxay wax ka bedeli karnaa malaha dhacda sidaynu wax uga bedelno sida aynu u dareemayno.
Fekerka: “hooyo fiican ma’ihi”, waxa lagu dheeli tiraa: “booqdaha caafimaadku waxa uu yidhi waad fiicantahay, ilmuhu waa ladanyahay”
5. Farsamada is dhinac dhiga
Farsamo kale waa inaad qorto fekerka dhinaca ee markiiba kaa soo baxa, kadibna aad ku dhinac qortid mid dhinaca fiican ah:
Fekerka dhinaca xun:
Ma awoodi karo wax kasta – gurigaygu waa qaribanyahay.
Si fiican baan sameenayaa. Waxba ma leh hadii uu gurigu yara qasanyahay.
Hore ayaad arintan u marin kartaa adoo buuga xasuusta sameenaya. Waxa laga yaabaa inay uyara eekaado naqshadan hoose. Isticmaal khidadan si aad u heshid feker isu dheeli tiran. Iska jir qalado inaad u fekertid sidan kuwan soo socda.
Fekerka kale ee isu dheeli tiran
Hooyada xaruntu way iskakey dhega tirtay
Niyad xumi iyo diiqad
Ima jecla, qofna ima jecla.
Waxay u dhowdahay in madaxeeda wax ku jireen –go’aan baan iska gaadhey inaaney I jeclayn.
6. Tijaabi, xasuusana tafaasiisha
Baadhistu waxay ina tusaysaa in qofka diiqadaysani aanu xusuusan tafaasiisha dhacdooyinka, laakiin go’aan guud iska gaadho, sida “Weligey waxba kuma fiicnayn”. Tijaabi, iskuna tababar tafaasiisha si aad u xasuusan waayo- aragnimada iyo waqtiyada fiican. Buug xasuusta ayaa kaa caawin kara arintan. Liis garayso guulaha iyo dhinaca aad ku fiicantahay sida “inta badan ma habsaamo”, “Saaxiibkey ayaa caawiyey salaasadii”, “Lamaanahaygu wuu igu amaanay shaqadii wiigii hore aan qabtey”.
7. Xalinta mushkiladda adag
8. Rumaysnaanta muddo dheer
9. Xagee aan ka heli karaa kaalmo dheeraad ah?
Haseyeeshee, hadii aad u malynayso inaad taageero dheeraad ah u baahantahay, ku noqo dhakhtarkaaga ama booqdaha caafimaadka. Sidii aynu horeba u sheegnay waxa jira daaween kale.
Miyey jiraan khadad kaalmo ama taageero kale ah?
Ururada iyo khadadka taageero ee soo socdaa way yeelan karaan faaiido:
Ururka xauunka diiqada umusha – waxa loogu talagalay dumarka la kulma diiqad marka ay ilmo dhalaan:
Mind – Deeq caafimaad maskaxda
Relate – taageero guurka iyo dhibaatada isku xidhnaanta:
Qorshaha saaxiibeynta, u soo badhiga taageero wax ku ool ah reeraha haysta dadka yaryar ee degan “north east of England”.
Ururada deegaankaaga – booqdaha caafimaadka ama dhakhtarkaagu waxay ku siin karaan nambarada ururada deegaankaaga ee ku caawin kara.
Duugista jidka (massage – ka) ilmaha way kuu diyaar noqon karta – waydii booqdaha caafimaadka. Tani waxay u noqon kartaa ilmaha iyo hooyada raaxo (nasasho).
Kuwan soo socdaa waa buugaag aad soo iibsan karto ama ka soo deynsan karto laybereeriga. Reeraha ama asaxaabta jecel inay taageeraan, iyaguna way ka faaiidaysan karaan